Miidhaa dhaabbilee amanataa naannoo Amaaraatiin walqabte namoonni 22 to'annoo jala olfaman - BBC News Afaan Oromoo
Miidhaa dhaabbilee amanataa naannoo Amaaraatiin walqabte namoonni 22 to'annoo jala olfaman
23 Muddee 2019
Madda suuraa, AMHARA MASS MEDIA
Miidhaa Naannoo Amaaraa Godina Gojjaam Bahaa Magaalaa Moxaatti Jimaata darbee masjidootaafi dhaabbilee daladalaa irratti raawwatameen walqabatee shakkamtoonni 22 to'anno jala oolfamuun qorannoon eegalmuu qajeelchi poolisii godinichaa beeksise.
Godina Gojjaam Bahaatti Itti-gaafatamaa Qajeelcha poolisii kan ta'an Inspektarri ol-aanaa Ayyaalneh Tasfaayee BBC'tti akka himaniitti, hanga ammaatti shakkamttoonni 22 to'annoo jala kan olfaman yoo ta'u, hawaasni namoota yakka raawwatan eeruudhaan dabarsee akkuma kennuun lakkoofsi kun dabaluu akka danda'u dubbataniiru.
Namoonni hanga ammaatti to'annaa jala oolfamanis haaluma wal duraafi duubaa ittin to'atamaniin mana murtiitti kan dhiyaatan ta'uus dabaluun himaniiru.
Wayita ammaa kanattis magaalaan Moxaa gara tasgabbiitti deebi'uu kan himan Inspektar ol-aanaa Ayaalnah, eegumsi magaalattii cimusaas dubbataniiru.
Naannoo Amaaraa magaalaa Mooxaatti manneen amantaa gubatan
'Haleellaa barattootarratti qiyyaafate hunduu balaaleffachuu qaba'
Abbaan Alangaa Naannoo Amaaraa du'an
Poolisoonni naannichaas humnoota addaa waliin ta'uun magaalattii haala tasgabbii duraan turteetti deebisuuf hojjachaa jiru kan jedhan Inspeektarri kun, hojiiwwan qorannoo, tasgabbeessuufi ummattoota walitti fiduus wal maddiin hojjatamaa jira jedhaniiru.
Namoonni tokko tokkoo midiyaalee hawaasummaarratti magaalattiitti walitti bu'iinsi ka'uu akka danda'uu poolisii magaalattiif eeruun qaqabuulleen gurraa kennuufii dhiisuu isaatti badiinsi kun qaqabuu ibsaa jiru.
Gaaffii kana waliin walqabatee dhiyaateef deebii yoo kennan, ''ragaan kun nus qaqabuun ilaallee jirra. Garuu eeruun jechaanis ta'ee barreeffamaan qindaa'ee nu qaqqabe omtu hinturre,'' jedheera.
Amma magaalattiin tasgabbaa'uu kan himan Inspeektar Ayaalnah, kanneen naannoo suuqiiwwan gubataniitiin ala waajiraaleen mootummaafi manneen barnootaa saaqamuu himaniiru jedhan.
Haleellaa Mooxaa: 'Namootni shan gocha kana hooggananiiru jedhaman to'atamaniiru'
21 Muddee 2019
Naannoo Amaaraa: 'Haleellaa barattootarratti qiyyaafate hunduu balaaleffachuu qaba'
Magaalaa Dassee masjiida Shawaabar irra balaa ga'een namoonni 11 miidhaman
24 Adooleessa 2018
'Joo Baayidan pirezidentii US isa dura turerraa addadha' -Putiin
Loltoonni Eertiraa 'dhiyootti' Tigraay keessaa bahu - UNtti ergamaa Itoophiyaa
Lammiin Ispeen haadhasaa 'ajjeesee nyaate' hidhaa waggaa 15'n adabame
Itoophiyaan dhimma Hidha Haaromsaarratti yaada Liigiin Arabaa dhiyeesse kuffiste
Hayyu dureen ABO hidhaa manaarraa akka gadi dhiifaman Amnastii Intarnaashinaal gaafate
Israa'el Gaazaarratti haleellaa xiyyaaraa gaggeessite
'Maqa balleessiin MM Abiy irratti adeemsifamaa jira' - Waajira Ministira Muummee